Muran ka taagan heshiiska hub kala iibsiga ee Ruushka iyo Turkiga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Muran ka taagan heshiiska hub kala iibsiga ee Ruushka iyo Turkiga
Muran ka taagan heshiiska hub kala iibsiga ee Ruushka iyo Turkiga
Wadamada xulufada ka ah Gaashaan Buurta Nato ayaa waxa ay jawaab ka bixiyeen go’aanka muranka dhaliyay ay dowladda Turkiga heshiiska kula saxiixatay dalka Ruushka, si ay isugu hubayso hannaanka difaaca gantaallada Ruushka ee S-400, taas oo Nato ay ku tilmaantay inuusan la jaanqaadi karin qalabkeeda.
Balse Ruushka ayaa sheegay in hannaanka S-400 uu gaari karo 400km wuxuuna isku mar soo ridi karaa 80 bartilmaameed.
Wadamada Ruusha iyo Turkiga ayaa galay heshiis ku saabsan in ay kala iibsadaan hubka gantaalada, waxaana uu Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, uu sheegay in ay bixiyeen lacago hour dhac ah oo ku saabsan in ay hub kaga soo iibsadaan Moscow.
Lacagadah ku baxaya heshiiskani oo hub kala iibsiga ah ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa gaaraysa ilaa 2.5 Billyen oo Dollar,balse waxaa arrintaasi durba saluug ka muujiyay Gaashaanbuurta Nato.
Waddanka Turkiga oo leh ciidammada labaad ee ugu ballaaran xulufada Nato, ayaa xiriir dhaw la sameystay Ruushka kaddib markii uu mugdi soo kala dhexgalay xiriirkii kala dhaxeeyay Mareykanka iyo Yurub.
Turkiga ayaa ka soo horjeeda taageerada Maraykanka ee jabhadda YPG ee Kurdiyiinta Suuriya wuxuuna xiriir dhow uu la leeyahay Wadanka Ruushka oo Mareykanku colaad dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda ka dhexeyso.
Previous articleSoomaliya oo ka qeybgashay shirka Amniga Bariga Afrika ee Yugandha
Next articleGoobo ganacsi oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed oo boob loogu geystay K/Afrika